အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by kai on Nov 10, 2013 in Editor's Notes, News | 22 comments
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည သန်းခေါင်ယံကျော် တာနဲ့ ဆောင်းဥတု(ဟေမန္တ)သို့ ကူးပြောင်းလို့သွားပါပြီ။ ဆောင်းဥတုဟာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ ရက် နေ့မှ တပေါင်းလပြည့်ညလယ်အထိ ဆောင်းလေးလဖြစ် ပါတယ်။
မိုးဥတုနဲ့ဆောင်းဥတုအထူးဥတုပြိုင်ကာလမှာ အပူနဲ့ အအေး လေဒေါသနဲ့သလိပ်ဒေါသတို့ အားပြိုင်ကြပြီး ရောဂါဘယတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ မိုးဥတုမှာလေဒေါသ ကြီးစိုးမင်းမူခဲ့တဲ့အတွက် လေစာအခါးအရသာကို သွေး သားက တောင့်တသလို ဆောင်းဥတုအခါမှာတော့ သလိပ်ဒေါသကြီးစိုးမင်းမူတဲ့အတွက် သလိပ်ငြိမ်စာအချဉ် အရသာကို သွေးသားကတောင့်တပါတယ်။
အခုလို ဥတုနှစ်ပါးအားပြိုင်ကာလမှာ ဥတုနှစ်ပါး လုံးနဲ့သင့်မြတ်အောင် အခါးအရသာဖြစ်တဲ့ မဲဇလီဖူးကို ရှောက်ရည်၊ သံပရာရည်တို့နဲ့ချဉ်ချဉ်လေးသုပ်စားပါက ကျန်းမာရေးကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်။ မိုးရာသီမှဆောင်းရာ သီအကူးဥတုနှစ်ပါးလုံးနဲ့ သင့်မြတ်တဲ့အတွက် ရောဂါ ဘယမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွေး၊ လေ၊ သလိပ်တို့ကို ညီညွတ်မျှတစေပါတယ်။ မဲဇလီဖူးကို အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား စားသုံးခြင်းဟာ တိုင်းရင်းဆေး ပညာအမြင်နဲ့အလွန်သင့်မြတ်လှတဲ့ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ် ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ။ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အစမှ နိုဝင်ဘာလ ပထမအပတ်အတွင်း ကုန်သွယ်ခွန် (သွယ်ဝိုက်ခွန်)၊ ဝင်ငွေခွန် (တိုက်ရိုက်ခွန်)၊ တံဆိပ်ကောင်းခွန် နှင့် အောင်ဘာလေခွန်တို့မှ တစ်နိုင်ငံလုံး အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုသည် ကျပ် ၁၆၆ရ ဒသမ ၂၈၁ ဘီလီယံရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကောက်ခံရရှိမှုမှာ ကျပ် ၁၁၆၄ ဒသမ ၁၂၈ ဘီလီယံဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလထက် ကျပ် ၅၀ဝ ဘီလီယံကျော် ပိုမိုကောက်ခံရရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၉ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၉ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းမည့်အချိန်ကို တစ်လ နောက်ဆုတ်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
မြန်မာအစိုးရမှ လူမှုအသိုက်အဝန်း ၃၉၀၀ဝကျော်နှင့်အိမ်ထောင်စု ၂၆၅၀၀ဝကျော်အား Digital – T2 Set – Top – Box အလုံး ၃၀၄၀၀ဝကျော်အခမဲ့ပံ့ပိုးကုညီပြီး TVများအား Digital စနစ်ကူးပြောင်းခြင်းကိ ၂၀၂ဝ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုသိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၈ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမှ ရန်ကုန် တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲမည့် Biman လေကြောင်းလိုင်းသည် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်တွင် စတင်ပျံသန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုဝင်ဘာ ရ ။ မြန်မာနိုင်ငံသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအသီးသီးတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပစ္စည်းများကို CB Bank Payment Gateway အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှ စတင်ရောင်းချနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စနစ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ငွေပေးချေရန် သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရန် Online Payment Gateway (CB Bank မှ လုပ်ဆောင်မည်) ငွေစာရင်းရှင်းရန်နှင့် ငွေလက်ခံရန်အတွက် CB Bank ရှိ စာရင်းရှင် အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုဝင်ဘာ ၆ ။ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် နိုင်ငံလုံးအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် လိုင်ဇာမူဘောင်ပါ အချက်အများစုကို အစိုးရက သဘောတူ လက်ခံထားကြောင်း လိုင်ဇာမူ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ညှိနှိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက ပြောကြားသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ နှစ်ရက်တာ ကျင်းပသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဘီဂျေနမ်ဘီးယား၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ လေ့လာသူ မစ္စတာဝမ်ရင်ဖန်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခြောက်ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး UNFC အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့နှင့် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ MPC၊ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ MPC တို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၅ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ၅၃ ဒသမ ၉၁၁ မိုင်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရဲနှင့် ပြည်သူအချိုးမှာ ၁ အချိုး ၉၀ဝ ရှိသော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မူ ၁ အချိုး ၅၀ဝ ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နယ်စပ်လုံခြုံရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းက ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာ ၄ ။ မန္တလေးမြို့တော် အခြေစိုက် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာများ စုစည်းကာ အလွှာစုံပါဝင်သော မန္တလေး စာပေစကားဝိုင်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁ဝ ရက်န့မှ စတင်၍ တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စကားဝိုင်း ဦးဆောင်စီစဉ်သူများထံမှ သိရှိရသည်။ မန္တလေး မြို့တော်တွင် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ဓမ္မဗိမာန် စာပေဝိုင်း၊ ဟံသာဝတီ စနေစာပေဝိုင်းတို့မှာ မြန်မာစာပေ လောကတွင် ထင်ရှားခဲ့ဖူးသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂ ။ မြန်မာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကို ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်သာ ကိုင်သာ ရှိစေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ရာတွင် မတည်ငွေရင်း ပမာဏနှင့် ကနဦး ထည့်ဝင်ငွေ ပမာဏ ကန့်သတ်ထားရှိခြင်းများကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ရ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်မှ BE (Aerospace proputsion & Flight vehicles) စက်နှင့် ပျံသန်းယာဉ် ပညာခွဲဌာနမှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများသည် DAWN SWAZ အမည်ပေးထားသည့် အဝေးထိန်းစနစ်သုံး လေယာဉ်ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့ရာ အောင်မြင်စွာ ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁ ။ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက မော်တော်ယာဉ် နံပါတ်များကို ၄စလုံးမှစ၍ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးလျက်ရှိရာ နံပါတ်အဟောင်းများ ဖြစ်သော ၁က၊ ၂က နှင့် ၃က များကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဦးရေ တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်မှု တိုးတက်လာလျက်ရှိရာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှုမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ တစ်လအတွင်း ၄၉၂၆ဝ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Times of India (blog)-28 minutes ago
01:39 AMIt was an evening of extravagant entertainment when Gabriela Isler from Venezuela was crowned Miss Universe 2013 at Crocus City …
01:13 AMVenezuela Q: What is your biggest fear and how do you plan to overcome it?A: We should overcome all our fears and this in turn would make us stronger As soon as we overcome our fears we can face any challenge.
01:12 AMPhilippines Q: What can be done about the lack of jobs for young people starting their career around the world?A: do believe we should invest in education – and that is my primary advocacy. Education is primary source and it is ticket for better future.
01:10 AMSpain: Q: What is the most significant thing we can do help elect women to political offices around the world?A: In order to selectagood woman she must posses good qualities in order to doagood job discipline, knows how to adapt… so she can fulfill her job
01:10 AMBrazil Q: What is your opinion in places that do not allow women to vote, or drive cars..A: Good evening everybody! In my opinion, we as women achieved our independence through time. Unfortunately nowadays we still have problems with our independence. But we need to keep our open minds because nowadays we are homemakers, part ofawork force. We are capable of everything.
12:58 AMTop5semi-finalists: Ecuador, Brazil, Spain, Philippines and Venezuela
1) Spain – Patricia Yurena Rodriguez, 2) Philippines – Ariella Arida, 3) Great Britain – Amy Willerton, 4) India – Manasi Mogh e, 5) Brazil -Jakelyne Oliveira, 6) USA – Erin Brady, 7) Ukraine – Olga Storozhenko, Ecuador – Constanza Baez, 9) Venezuela – Gabriela Isler, 10) Dominican Republic – Yaritza Reyes.
The top 16 contestants of Miss Universe 2013 are:
1) Costa Rica, 2) Ukraine, 3) China, 4) Ecuador, 5) Great Britain, 6) Indonesia, 7) Venezuela, Dominican Republic 9) Puerto Rico, 10) Spain, 11) USA, 12) Nicaragua 13) Switzerland 14) India 15) Brazil, 16) Philippines.
ဗင်နီဇွဲလား က ရတာ ရ ကြိမ်ရှိပြီ ဆိုပဲ။
1981: Irene Saez
1986: Barbara Palacios Teyde
Top5ယောက်စလုံးတော်တော်လှပြီး စမတ်ဖြစ်တယ်။ ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ အဖြေက ဟေ့ာဖြစ်နေတဲ့အခြေခံ အကြောင်းအရာလို့ထင်တယ်။biggest fear လို့မေးထားတာကို all fears လို့ပြန်ဖြေသွားတာလေးကြိုက်တယ်။Ecuador ရဲ့ Q n A ကိုတမင်များမထည့်တာလား။
“Q: What would happen to the world if we could no longer use the internet?
A: Tech has disadvantages – we are no longer close with our families. We use the methodology of computers and internet for the positive. It is never too later to start. Let’s start now.”
ဘာလို့သူတို့တွေ ဘာသာပြန်ခေါ်လာတာလည်းမသိဘူး။ ဖိလစ်ပင်းက တော့ ဘာသာပြန်မပါဘူး။
စတီဗင်တိုင်လာကြီး စန်ဒယား ပေါ်တက်ပြီး သီချင်းဆိုလိုက်သေး။
မိုးစက်ဝိုင် မရတော့ ခရိုနီတွေ အောင်ပွဲ မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဟီးးးး Russia ကလည်း ခရိုနီတွေမျက်နှာမှမထောက်။တောက်ခ်….။သူ့ဆီက လေယာဉ်ပျံ ကအစ လက်နက်ခဲယမ်း အကုန်လုံးအားပေးထားတာ။
စလုံးက ဗန်းထားတဲ့ website “Singapore bans Ashley Madison adultery website” “http://sg.news.yahoo.com/singapore-bans-ashley-madison-adultery-website-174247577.html”
ဆိုဗီယက်ပြိုလဲတော့… အဲဒီနိုင်ငံကသူတွေထဲ.. ဘိုမ(ရုရှားမ)ဖြူဖြူလှလှတွေ..ကမ္ဘာအနှံခြေဆံ့ကြရသလို… အမေရိကား..ဥရောပကနေ.. အဲဒီကမိန်းကလေးတွေကို..ကောက်ယူမွေးပြီးစားကြသပေါ့…။
အာရှမှာလည်း.. ဂျပန်..ဟောင်ကောင်းစသဖြင့်.. ရုရှားမလေးတွေရောက်လာပြီး.. ဖော်ချွတ်အကကလပ်တွေ… ပြည့်တန်ဆာတန်းတွေ.. စုံလို့အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်..။
ရုရှားကလေးတွေကိုလည်း… ကမ္ဘာအနှံ ့ခေါ်မွေးစားကြတာ… နောက်ဆုံး ရုရှားကနေ… အမေရိကန်တွေခေါ်မမွေးစားရဆိုပြီး… ဥအဒေပြု..ပိတ်ရတဲ့အထိပဲ..
ဒါတောင်… ဆိုဗီယက်ပြိုလဲပြီး… အနှစ် ၂ဝကျော်ကြာမှ…
Putin Signs Ban on U.S. Adoptions of Russian Children – NYTimes …
Dec 27, 2012 – MOSCOW — President Vladimir V. Putin signedabill on Friday that bans the adoption of Russian children by American citizens, dealinga.
တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပုံခြင်းကွာလို့ထင်တယ်။အောက်ကဆြာဂီတောင် အမျိူးစောင့်ဖို့ ၄ယောက်လောက်ယူမယ်ဆိုပဲ။
ကျန်တာကျ အကုန် အတုထုတ်ပီး ….
မိန်းမကျ အတုမထုတ်နိုင်ရော့သလား…. မျက်ရစ်မပါတဲ့ စိန က အေဘေးဒို့ရယ်….
(စောင့်လေမျိုးနွယ်တဲ့ခည… ၄ယောက်လောက် ယူမှ)
အမေရိကားကတော့.. ပြန်သုံးဆီ..ဆီတုတွေ ဘန်းပြီတဲ့ခင်ဗျ..
WASHINGTON November 8, 2013 (AP)
North Korea publicly executes 80 people ‘for watching smuggled South Korea TV shows’
Newspaper says most were charged with watching smuggled South Korean TV shows
PUBLISHED : Monday, 11 November, 2013, 11:35am
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့သူ လူပေါင်း ၈ဝ အား ကွန်မြူနစ် အစိုးရက လူသိရှင်ကြား ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်း ရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်ကို Joong Ang Ilbo သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့အထိ စာရင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အရံရွှေ ပမာဏ
ရ ဒဿမ ၁၅၃၉ တန်နဲ့ နိုင်ငံခြားအရံငွေ ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒဿမ ၁၃ ဘီလီယံ ရှိတယ်လို့ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌက ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။
ရွှေစင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်မှာ သိမ်းဆည်းထားပြီး နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုတော့ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေမှာ ငွေသားအနေနဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေမှာ ဘဏ်အကောင့်တွေအနေနဲ့ လည်းကောင်း ထားရှိတယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
၎င်းတို့၏ မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူ ကိုကျော်သူရ ကလည်း အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ကိုကျော်နေဝင်း နှင့် ကိုအေးနေဝင်း တို့ ၂ ဦး နေအိမ်သို့ ကောင်းမွန်စွာ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဘိုးတော် စကြာ အောင်ပွင့်ခေါင်သည် လည်း သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်က ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြောင်း ဧရာဝတီကို သည်။
ကိုအေးနေဝင်းနှင့် ကိုကျော်နေဝင်းတို့ ၂ ဦးသည် အဘိုးဖြစ်သည့် ကွယ်လွန်သူ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်း၊ မိခင် ဒေါ်စန္ဒာဝင်း၊ ဖခင် ဦးအေးဇော်ဝင်း၊ ညီအစ်ကို တဦးဖြစ်သည့် ကိုဇွဲနေဝင်း တို့နှင့်အတူ စစ် အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များအား ဖမ်းဆီး ၍ နိုင်ငံတော် အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်သည် ဆိုသော နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဖြင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ် ဦးနေဝင်းသည် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက် နံနက် ရ နာရီခွဲခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အေဒီလမ်း နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက်(၉၂)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
Published: 26 Nov 2013 at 11.49
The discovery ofapreviously unknown wooden structure at the Buddha’s birthplace suggests the sage might have lived in the 6th century BC, two centuries earlier than thought, archeologists said.
ရှေ့ဆက် အတည်ပြုချက်တွေကို စောင့်ကြည့်နေပါအိ
လုမ္ဗိနီဒေသမှာ အသစ်တွေ့ရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို Carbon Dating နည်းပညာနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ရာ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတာ သတ်မှတ်ထားတာထက် နှစ်၂၀ဝလောက်စောမယ်လို့ ယူဆကြပါကြောင်း…..
(CNN) — There are about 500 million Buddhists worldwide, but it’s unclear exactly when in history this religion began. The Buddha’s life story spread first through oral tradition, and little physical evidence about Buddhism’s early years has been found.
နာမည်ကျော် National Geographic မဂ္ဂဇင်းက ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာနေရာအဖြစ် ထင်ရှားပြီး ဘုရားဖူးများ လာရောက်ကြသည့်နေရာဖြစ်သည့် နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ဗီနီရှိ မာယာဒေဝီကျောင်းတော်တွင် ဘီစီ ၅၅ဝ ခန့်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် ရှေးအကျဆုံးသော အထောက်အထားများကို ရှေးဟောင်း သုတေသန မြေတူး ပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းပေးပို့ထားသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမာ္ဘပေါ်ရှိ ဘာသာကြီးများထဲက တခုဖြစ်ပြီး ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ သန်း ၃၅ဝ ကျော်ရှိပြီး အများစုမှာ အာရှ အရှေ့ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာ နေ့ရက်အတိအကျသည် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိနေသည်။ နီပေါ အာဏာပိုင်များက ဘီစီ ၆၂၃ ခုနှစ် ဟု လက်ခံထားကြပြီး အခြားယုံကြည်မှုများက ပို၍ နောက်ကျသော ဘီစီ ၄၀ဝ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင်မှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိကာ ဝတ်ပြုရန်အတွက် မာယာဒေဝီ ဘုရားကျောင်း အဖြစ်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အခုအခါ မာယာဒေဝီ ဘုရားကျောင်းကို ကမာ္ဘ့ အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပြီ ဖြစ်သည်။
ဘုရားကျောင်း၏ အလယ်တွင်တူးဖော်ကြည့်သည့်အခါ သစ်ပင်ကို ဝိုင်းပတ်ထားသည့် သစ်သားအကာအရံများ စိုက်ထူ ခဲ့သည့် ကျင်းများကိုတွေကြရပြီး ဘီစီ ၅၅ဝ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဖြစ်သည်ဟုလည်း Coningham ကဆိုသည်။ အုတ်နှင့် ဆောက်လုပ်ထားသည်နေရာများ တွေ့ရသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ညောင်ပင် ကိုးကွယ်မှုကို ရှေးဟောင်း အိနိ္ဒယ အစဉ်အလာတွင်တွေ့ရသော်လည်း ယခုသစ်ပင်တွင် အခြားသော အလား တူ နေရာမျိုးများလို ဆည်းကပ်ပူဇော်မှုများ ပြုလုပ်ထားသည့် အရိပ်လက္ခဏာ မတွေ့ရဟုလည်း သိရသည်။
သစ်ပင်နေရာကို တူးဖော်စစ်ဆေးပြီးနောက် ဘီစီ ၁၀၀ဝ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Coningham က ပြောသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဲ့သို့ အနေအထားမျိုး အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ချိန်မှာ ဘီစီ ၆ ရာစု တွင်ဖြစ်နိုင်သည် ဟုလည်း သိရသည်။
ဗျို့စ်.. မာမွတ် ရှာပွတ်စ်.. အဲ့ရာ ဘိုလုပ်ကြမီဒုံး..
​အော်​… ပိဋကတ်​နဲ့ အစဉ်​အဆက်​မှတ်​သားရွတ်​ဆို ကျက်​မှတ်​ပြီး သံဃာယနာတင်​ခဲ့တာ​တွေကို
ဒီနေ့.. Black Friday နေ့ပါ..
Related Black Friday » Thanksgiving »
Black Friday crowds big, but calmUSA TODAY
BLACK FRIDAY LIVE: Shoppers find better onlineSan Francisco Chronicle
Opinion:Iowa View: We need to put brakes on this shopping trendDesMoinesRegister.com
Classic Rock’s “Black Friday” : Black Friday is the Friday following Thanksgiving Day in the United States, often regarded as the beginning of the Christmas shopping season. In recent years, most major retailers have opened extremely early and offered promotional sales to kick off the holiday shopping season, similar to Boxing Day sales in many Commonwealth Nations. Black Friday is notafederal holiday, but California and some o…